Free Fire ရဲ့ ၀ူခုန်း လမ်းညွှန်: All Hail the Monkey King! | Codashop Blog MM
Home Games Free Fire Free Fire ရဲ့...
Free Fire ရဲ့ ၀ူခုန်း လမ်းညွှန်: All Hail the Monkey King!
Free Fire မှာ Skill တွေ ကောင်းတဲ့ Character တွေပြည့်နေလို့ Character System က အရမ်းထူးခြားပါတယ်။ ဒီပိုစ့်မှာတော့ Free Fire ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ Charater တစ်ကောင်အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ၀ူခုန်း (Wukong) ပါဘဲ။ သင် Booyah ရဖို့ ဒီ Character ကဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
Free Fire မှာ ၀ူခုန်းကို ဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲ?
၀ူခုန်းကို Top-Up Event မှာမရရှိလိုက်တဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ Store ကို သွားပြီး Diamond ၄၉၉ နဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၁။ Free Fire ကို သင့် ဖုန်းတွင် ဖွင့်ပြီး မျက်နှာပြင်ရဲ့ ဘယ်ဖက်မှာရှိတဲ့ Store ကို နှိပ်ပါ။
Go to the Store and click on Characters.
၂။ Character Tab ကို သွားပါ။
၃။ အောက်ကို ဆွဲချပြီး ၀ူခုန်းကို ရှာပါ။ ပြီးတော့ Purchase ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ၀ယ်ယူဖို့ သင့်မှာ Free Fire Diamond တွေ အလုံအလောက်​ရှိဖို့တော့လိုတယ်နော်။
Choose Wukong and complete the purchase
၄။ ပြီးတာနဲ့ Character Selection ကို သွားပြီး ၀ူခုန်းကို ရွေးပါ။
Free Fire မှာပါတဲ့ဝူခုန်းက သင်တို့သိကြတဲ့ ဒဏ္ဏာရီထဲက ၀ူခုန်းမဟုတ်ပါဘူး။ FF Organisation က ဖမ်းပြီး စမ်းသပ်မှုများစွာ အလုပ်ခံထားရတဲ့ မျောက်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးက သူ့ဦးနှောက်ထဲကို AI System တစ်ခုထည့်လိုက်ပြီး ၀ူခုန်းကို လူတစ်ဦးလို အစွမ်းအစတွေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီ​ Event မှာ Nikita နဲ့ Moco တို့က FF ရဲ့ Data System ထဲက Firewall ကို Hack ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဥာဏ်အရမ်းကောင်းတဲ့ ၀ူခုန်းဟာ ဒါတွေဖြစ်နေတာကို အသုံးချပြီး ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
၀ူခုန်း ရဲ့ စွမ်းရည်
ဝူခုန်းရဲ့စကေးတွေက Free Fire မှာအထူးခြားဆုံးတစ်ခုဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခြုံပုတ်တစ်ခုအသွင် ရုပ်ဖျက်လိုက်တယ်လို့ စဉ်းစားကြည့်ပါ! ဟုတ်ပါတယ်၊ ခြုံပုတ်တစ်ခုပါ! ပုန်းရှောင်ခြင်း(သို့)ပြောက်ကျားစနစ်ဟာ အလွန်ထူးခြားတဲ့ စွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကစားတဲ့သူတွေဟာ ငြိမ်နေတဲ့အခါလည်းသုံးနိုင်ပြီး ရှင်သန်ဖို့အတွက်အရမ်းကောင်းတဲ့ လက်နက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဝူခုန်းဟာ ခြုံပုတ်တစ်ခုအသွင် ပြောင်းသွားတဲ့အခါ ရန်သူတွေက သူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်တွေကို မှတ်ထားလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ကစားသူတွေက ခြုံအသွင်ပြောင်းနေချိန်မှာလည်း ဆေးဗူးတွေကိုသုံးလို့ရပြီးတော့ အားအင်ပြန်ဖြည့်ဖို့ ပိုပြီးလည်းလုံခြုံပါတယ်။ အဲဒါကနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကျရင် အရေးပါဆုံးပါပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကစားပွဲပြီးလာတာနဲ့အမျှ အသက်ရှင်ကျန်မှ နိုင်နိုင်ချေများမှာ မဟုတ်လား? ပုန်းရှောင်ခြင်းကို ရန်သူတွေကိုခြုံခိုတိုက်ခိုက်ဖို့လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဝူခုန်းရဲ့စပါယ်ရှယ်စကေးကြောင့် သူ့အဖွဲ့အတွက်လည်း တစ်ယောက်တည်း ပွဲတွေကို အနိုင်ယူပေးနိုင်ပြီး ဘယ်ကစားနည်းမှာမဆို အသုံးဝင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပုန်းရှောင်ခြင်းကို ကစားပွဲရဲ့အဆုံးထိ အကြာကြီး အသက်ရှင်ကျန်နေချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ကောင်းကွက်တစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးချလို့ရပါတယ်။
၀ူခုန်း ရဲ့ ပုန်းရှောင်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကို ဘယ်လို အသုံးချရမလဲ?
၀ူခုန်းက ခြုံပုတ်ထဲမှာ ၁၀ စက္ကန့် ပုန်းရှောင်နိုင်ပါတယ်။ CD က ၃၀၀ စက္ကန့်ပါ။ ၀ူခုန်းက စတိုက်ခိုက်ရင် ဒီ ပြောင်းလဲမှုက ရပ်တန့်သွားမှာပါ။ ရန်သူကို တိုက်ခိုက်ပြီးရင်တော့ CD က ပြန်စပါတယ်။
ပုန်းရှောင်နိုင်တဲ့ Level 1: ကြာမြင့်ချိန် 10s , 300s တွင် CD ပြန်စသည်။
ပုန်းရှောင်နိုင်တဲ့ Level 2: ကြာမြင့်ချိန် 11s , 280s တွင် CD ပြန်စသည်။
ပုန်းရှောင်နိုင်တဲ့ Level 3: ကြာမြင့်ချိန် 12s , 260s တွင် CD ပြန်စသည်။
ပုန်းရှောင်နိုင်တဲ့ Level 4: ကြာမြင့်ချိန် 13s , 240s တွင် CD ပြန်စသည်။
ပုန်းရှောင်နိုင်တဲ့ Level 5: ကြာမြင့်ချိန် 14s , 220s တွင် CD ပြန်စသည်။
ပုန်းရှောင်နိုင်တဲ့ Level 6: ကြာမြင့်ချိန် 15s , 200s တွင် CD ပြန်စသည်။
ရန်သူတွေဆီကပုန်းဖို့ ခြုံပုတ်အသွင်ပြောင်းနိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့အရည်အသွေးအပြင် ဝူခုန်းရဲ့ တစ်ခြားထူးခြားချက်တွေကို သင်သိပါသလား?
Free Fire မှာ တစ်ကောင်တည်းသောမျောက်–လူ character ဖြစ်ပါတယ်။ လူ/စက်ရုပ် ရောထားတဲ့ characters တွေရှိပေမယ့် ဝူခုန်းက တစ်မူထူးခြားပါတယ်။
ပုန်းရှောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်သုံးနေတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဝှက်ထားရုံတင်မကဘဲ ရန်သူရဲ့ Auto Aim ကိုပါ ပျက်စေပါတယ်။ အဲ့တော့ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့အခါ သူ/သူမက သင့်ကိုတိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်ထားလို့မရတော့ပါဘူး။
ဝူခုန်းဟာ heroes တော်တော်များများအတွက် အလွန်ကောင်းတဲ့ counter ဖြစ်ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် Chrono ပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဝူခုန်းက auto-aim ဆိုတဲ့ ပစ်မှတ်ထားတာကို ပယ်ဖျက်နိုင်လို့ပါပဲ။
ဝူခုန်းနဲ့ တွဲနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးစွမ်းရည်များ
ဝူခုန်းရဲ့ ပုန်းရှောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့်နိုင်ဖို့ သူ့ကိုအောက်ပါ စကေးများနဲ့ တွဲပေးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
Maxim’s Gluttony. သူ့ရဲ့ passive စကေး Gluttony ဟာ မှိုတွေကိုစားခြင်းနဲ့ ဆေးဗူးတွေကို 40% ပိုပြီးလျင်မြန်စွာသုံးနိုင်ပြီး ဝူခုန်းရဲ့ ပုန်းရှောင်ခြင်းကိုပိုပြီး အကျိုးရှိစေပါတယ်။ စကေးစသုံးချိန်မှာ ဆေးဗူးတွေအများကြီးကိုတစ်ခါတည်းစားလိုက်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာ HP အပြည့်ပြန်ဖြစ်ဖို့ မြန်သွားပါတယ်။
Rafael’s Dead Silent. ပုန်းရှောင်ခြင်းကို Rafael ရဲ့စကေးနဲ့ တွဲလိုက်တဲ့အခါ ( စနိုက်ပါတွေနဲ့ marksman ရိုင်ဖယ်တွေနဲ့ အလုပ်မလုပ်တော့တာ) လုံးဝကို သေစေနိုင်တဲ့ ပေါင်းစပ်မှုပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခြုံပုတ်အနေနဲ့ အရောင်ဖျောက်ပြီး တိတ်တဆိတ် ရန်သူတွေကို သတ်ပစ်တာကတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
Hayato’s Bushido. ဒီပေါင်းစပ်မှုနဲ့ ပိုပြီးအားပြင်းမယ့် ခိုးတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကို စမ်းကြည့်ပါ။ ပြီးရင် ဝူခုန်းက ပုန်းရှောင်ခြင်းကိုစသုံးတဲ့အခါ Hayato ရဲ့ Bushido က တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အရေးကြီးတဲ့အနီးကပ်တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေမှာ armor penetration ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Codashop နဲ့ Free Fire ကိုဖြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့အုန်းနော်။ ပိုမိုမြန်ဆန် စိတ်ချရပြီး အပူအပင်ကင်းစွာကစားနိုင်ပြီး အဆင်ပြေတဲ့ ငွေဖြည့်မှုကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Previous articleMLBB Phoveus Hero လမ်းညွှန် : အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ပုံ၊ Emblem နှင့် အခြားအကြံပြုချက်များ
Next articleသင့်ရဲ့ Grenade Skill တွေ တိုးတက်စေဖို့ ဒီ​ Free Fire လမ်းညွှန်ကို ဖတ်လိုက်ပါ
Yan Naing Lin July 4, 2021	At	11:32 pm